Wasiirka Warfaafinta oo diiday inuu xasuuqa Kenya ka hadlo -ku xigeenkiisa muxuu yiri? Ogaadeen Vs Mareexaan ?
Topnews:- Wasiirka Warfaafinta oo diiday inuu xasuuqa Kenya ka hadlo -ku xigeenkiisa muxuu yiri? Ogaadeen Vs Mareexaan ?
01 July 2013 Waagacusub.com-Wasiirka Warfaafinta Dowladda Somalia Mr Ciilmooge ayaa diiday inuu qabto shirkii Jaraa''id ee lagu eedeeyay in Ciidamadda kenya la safteen Jabhada Raaskambooni.
Wasiirka oo u dhashay beesha Ogaadeen wuxuu uldheer iskaga fogeeyay inuu ka hadlo xasuuqa Ciidamadda Kenya ka geysteen Kenya,waxaana taasi qasabtay in Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Abdishakuur Ali Mire oo u dhashay beesha Mareexaan la hadlo Saxaafadda .
Abdishakuur Ali Mire wuxuu xasuuqa Kismaayo uga hadlay si geesinimo leh,oo Somalinimo ku jirto laakiin hadalkiisa wuxuu ku beegan yahay xilli la hagraday beelaha degan Jubooyinka ee Somalinimadooda loo xasuuqay.
Xukumadda Federalka Somalia waxaa looga fadhiyaa inay si deg dega dalka uga saarto Ciidamadda gumeeysiga Kenya ee shacabka Soomaaliyeed sida arxandarada u xasuuqay,waana nasiibdaro in gumaadka gumeysiga ee kismaayo lagu daawaday beelaha Mareexaan iyo Cawramale.
Dowladda Federalka Somalia waxay karti daradeeda gaartay in abaanduulahii Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee Jubooyinka Korneyl Cabaas laga afduubto Kismaayo,oo Kenya ku xiran yahay.
Wadaniyiinta Soomaaliyeed waxay Ra''isulwasare Saacid ugu baaqeen inuu si degdega xilka uga qaado Wasiir Ciilmooge maadama uu qabyaalad darteed faraha uga laabtay shaqadii loo igmaday.
Dowladda Federalka Somalia beelaha dagaalka kula jira gumeeysiga Kenya marnaba taageero dhaqaale,mid diblomaasiyadeed iyo mid gaashaandhig ma siinin taasina waxay Calaamatu su-aal saartay qadiyada Dowladda Somalia ee ilaalinta Qaranimadeena.